स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद हुने - Bazaar Khabar
मुख पृष्ठ » स्वास्थ्य » स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद हुने
काठमाडौं, भदौ ७ : सरकारले कोरोना संक्रमतिको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारका दोषीलाई कारबाही गर्ने भएकाे छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमणका घटना बढेसँगै सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर बुढाले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए। ‘दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्। दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ। कारबाहीको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ,’ बुढाले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रजिअले कसैको आदेश पर्खन पर्दैन र सोध्न पर्दैन, कार्यन्वयन गरे हुन्छ।’
काठमाडौं, संखुवासभा, विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवन र जाजरकोटलगायतका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?
अहिले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमण गरे संक्रामक रोग ऐन–२०२० अनुसार कारबाही हुनेछ। ऐनको दफा २ मा ६ महिना कैद वा ६ सय जरिवाना हुने व्यवस्था छ। ‘यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत प्राप्त व्यक्तिहरुलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिना कैद वा ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा ३ (२)मा भनिएको छ।
ऐनको दफा ४ मा कारबाहीको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारबाही र किनरा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ,’ दफा चारमा भनिएको छ।
कहाँ–कहाँ भए दुर्व्यवहार र आक्रमण ?
साउन ३० गते चितवनका कोरोना संक्रमित भएका चिकित्सक विश्वबन्धु बगालेलाई स्थानीयले अपमानित गर्दै घरमा स्टिकर टाँसेका थिए।
शनिबार बिहान सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी राखिएको बानेश्वरको लर्ड बुद्ध होस्टलमा स्थानीयले घेरेका थिए। ती स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित थिएनन्। तर, टोल सुधार समितिको अगुवाइमा शनिबार बिहानै होस्टल घेराउ गर्दै घर खाली गर्न माग गरेका थिए।
यस्तै चितवनको बकुलहर रत्नगर अस्पतालका स्वाब संकलन गर्ने एक प्राविधिकलाई पनि स्थानीयले अपमानित हुने व्यवहार गरेका थिए। स्थानीयले घर घरेर बस्न नदिएपछि उनी हाटेलमा बसेका थिए।
संखुवासभामा क्याम्पस प्रमुखको नेतृत्वमा आइसोलेसन वार्ड नै तोडफोड गरिएको छ। वार्ड तोडफोड र स्वास्थ्य सामाग्री गायव बनाएको आरोपमा हिमालय किरण क्याम्पसका प्रमुख मातृका तिम्सिनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
यस्तै जेठ ३ गते नागढुंगामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएर काठमाडौं आउँदै गरेका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक नारायण कार्कीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो।
पर्सामा साउन २४ गते २० वर्षाीया युवतीको मृत्यु भएपछि अस्पतालले भर्ना गर्न नमानको आक्रोशमा मृतकका आफन्त र स्थानीयले २५ गते नारायणी अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरुले अस्पतालभित्र तोडफोड समेत गरे। अस्पतालका कोभिड संयोजक उदयनारायण सिंहको कारको सिसा समेत फुटाएका थिए भने अस्पतालका मेसु र डाक्टरविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। स्थानीयले तोडफोड गरेपछि अस्पतालका तीन सय ५० स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले राजीनामासमेत दिएका थिए।
विराटनगरको कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितका आफन्तले साउन तेस्रो साता आइसोलेसन कक्षमा प्रवेश गरी डाक्टरमाथि हातपात गरेका थिए।
यस्तै जाजकोटमासमेत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको छ। जेठ १६ गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सामा कार्यररत डाक्टर नवीन सहानीमाथि आक्रमण भएको हो।